‘गर्भवतीलाई बचाउँनै मुस्किल’ |
‘गर्भवतीलाई बचाउँनै मुस्किल’
प्रकाशित मिति :2017-12-26 11:12:21
-रमेश रावल –
कालिकोट । तिलागुफा नगरपालिका –११ की २४ बर्षिया हरिशोभा बि.क.लाई गत असार ३० गते सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । घरमा सुत्केरी हुन नसकेपछि उनलाई आफ्न्तले गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा पुय¥याए । त्यहाँ उनको सुत्केरी हुन सकेन । ३१ गते जिल्ला अस्पताल कालिकोट पु¥याए । अस्पतालले अपरेसनपछि बच्चा त निकाल्यो तर आमालाई अत्याधिक रक्तश्राप भयो । साउन १ गते हेलिकोप्टरमार्फत नेपालगञ्ज पु¥याएपनि उनको बाटोमै मृत्यु भयो । समयमै अस्पताल पु¥याउन सकेको भए उनको ज्यान जोगिने थियो । तेस्रो सन्तानको रुपमा जन्मिएको बच्चा पनि २ दिनपछि मृत्यु भयो ।
गत साउन ६ गते रास्कोट नगरपालिका–७ की २० बर्षीया बिन्दा लुवार घरमै सुत्केरी भइन् । तर अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि उनको अस्पताल लैजादै गर्दा बाटोमै ज्यान गयो ।
यस्तै रास्कोट– ६ कै २३ बर्षिया गोरीकला फर्सालको पनि साउन १५ गते सुत्केरी व्यथाले ज्यान लियो । व्यथा लागेपछि एक दिनको पैदल दुरीमा पर्ने जिल्ला अस्पताल कालिकोट पु¥याएपनि त्यहाँ सुत्केरी गराउन सकेन । अर्काे दिन थप उपचारका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला लैजादै गर्दा गोरीकलाको बाटोमै प्राण गयो ।
गएको मंसिर दोस्रो साता पनि खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की ३१ वर्षीया चन्द्रा शाहीको सुत्केरीले ज्यान लियो । अत्यधिक रक्तश्राप भएपछि हेलिकोप्टर मार्फत शिक्षण अस्पताल काठमाडौं पु¥याए लगत्तै उनलाई मृत घोषणा गरियो ।
जिल्लामा सुत्केरी गराउने दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रविधिको अभावमा अन्य जिल्ला र राजधानीका विभिन्न अस्पताल रिफर गराएका अधिकांश गर्भवती महिलाले समयमा उपचार नपाउँदा यसरी नै अकांलमा ज्यान गुमाउन परिरहेको छ । जिल्लाका अधिकांश गाउँबाट सदरमुकाम मान्मसम्म पुग्ने राम्रो यातायात सुविधा छैन । जसोतसो जिल्ला अस्पताल प¥याएपनि दक्ष चिकित्सक र भरपर्दो उपचार व्यवस्था नहुँदा गर्भवती महिलाहरुले सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको हो ।
पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा जिल्ला अस्पताल कालिकोटले ६ जना गर्भवती महिलाको जिल्लामा सुत्केरी गराउन नसक्दा जिल्ला बाहिराका विभिन्न अस्पताल रिफर गराइएको थियो । ति मध्ये ४ जनालाई हेलिकोप्टर र २ जनालाई गाडीबाट सम्बन्धित अस्पताल पु¥याएपनि ४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । समयमै अस्पताल पु¥याउन सकेको भए उनीहरुको ज्यान बचाउन सकिने स्वंम स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् ।
जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रबाट जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न दुई देखि चार दिनसम्म लाग्छ । भौगोलिक विकटता र नजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा अधिकांश महिला घरमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसरी सुरक्षित सुत्केरी सेवाको अभावमा कालिकोटका धेरै गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको स्थानीय चन्द्रप्रसाद कोइराला बताउँछन् । ‘धेरैले अस्पतालको मुख नै देख्न नपाइ ज्यान गुमाउँछन्, अस्पताल पु¥याएपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘गर्भवतीलाई बचाउँनै मुस्किल छ ।’
जिल्लामा एक सरकारी अस्पताल, ३० स्वास्थ्य केन्द्र र ३० बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् । तर स्वास्थ्यकर्मी तथा डाक्टरहरु नियमित बस्दैनन् । गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरु कार्यालय सहयोगीका भरमा हुन्छन् भने जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरु पनि मुस्किलैले जिल्ला बसेका छन् ।
तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख दन्ता नेपालीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार अत्यन्तै नाजुक हुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुनु र औषधी समेत अभाव हुँदा सुरक्षित सुत्केरी गराउन मुस्किल रहेको बताए ।
हवाइ एम्बुलेन्सको माग
कालिकोटमा मात्र होइन, कर्णालीका सबै जिल्लामा गर्भवतीले अस्पताल नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । भौगोलिक विकटता र सडकको पहुँच नहुँदा विरामीलाई समयमै अस्पलात प¥याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयले हवाइ एम्बुलेन्स संचालन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘स्वास्थ्यचौकी भए पनि दरबन्दी अनुसार डाक्टर छैनन्, औषधी पनि छैन । भौगोलिक विकटताका कारण समयमा अस्पताल पु¥याउन पनि कठिन छ । त्यसैले हवाई एम्बुलेन्स कर्णालीबासीका लागि अत्यावश्यक छ, यसको तत्काल ब्यवस्था केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ हवाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था भए धेरै गर्भवती तथा अन्य बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
शिशु तथा मातृ मृत्युदर घटाउन चुनौती
नेपालमा प्रतिवर्ष प्रति १ हजार नवजात शिशुमध्ये २३ को मृत्यु हुने गरेको छ । यो दर कम गरी सन् २०३५ सम्ममा प्रति हजार १३ भन्दा पनि थोरै पुर्याउने उदेश्यका साथ सरकारले गएको मंसिर पहिलो साता कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय बालकोष ९यूनिसेफ० का अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष २३ हजार बालबालिकाको ५ वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ भने नवजात शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष १२ हजार २५२ छ ।
मध्यपश्चिममा गएको एक वर्षको अवधीमा सात सय ४१ जना शिशु र ८८ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यस क्षेत्रका १५ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेमा दुई सय २७ जना शिशु र २३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो । बाँकेपछि कालिकोट दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको उचित हेरचाह र समयमै उपचारको अभावमा ज्यान थप जोखिममा पर्ने गरेको छ । यसलाई कम गर्न निर्देशनालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रका दुर्गम गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको योजना ल्याएको मध्यपश्चिम क्षेत्रिय अस्पताल सुर्खेतका निमिक्त मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. डम्बर खड्काले बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णाली तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पौष्टिक आहारको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य जाँच, आमाको दूध लामो समयसम्म सेवन गराउनुपर्ने लगायत सुत्केरी तथा शिशु स्याहारसम्बन्धी अभियान सञ्चालनमा छ । तर अभियान प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुदाँ शिशु तथा सुत्केरी महिलाहरुको ज्यान जोखिममा रहेको अन्तरपार्टी महिला संजाल कालिकोटका अध्यक्ष बिनिता काफ्लेले बताइन् । उनले भनिन्,‘अभियान संचालनले मात्र केही हुदैँन । प्रभावकारी कार्यन्वयनको आवश्यकता छ ।’
आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत सुत्केरी महिलाको तत्काल उपचार तथा यातायात खर्च बापत स्वस्थ्य मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ छुटाएपनि त्यो रकम अपुग भएको डा. खड्काले बताए ।
नेपालमा करिब २५ प्रतिशत महिला २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको छ। यसरी कम उमेरमा गर्भवती हुनु भनेको प्रजनन स्वास्थ्य सुधार र मातृशिशु मृत्युदर घटाउने अभियानको प्रमुख चुनौती हो।
किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुँदा तल्लो पेट दुखिरहने, प्रसूतिको समयमा बढी रक्तस्राप हुने, लामो बेथा लाग्ने, मूच्र्छा पर्ने, कम तौलको बच्चा जन्मने, जन्मम्दा बच्चा अड्कने, सालनाल नझर्ने, बच्चा जन्मेपछि पाठेघर खस्ने, पाठेघर र प्रजनन अंगमा संक्रमण हुने, रिंगटा लागिरहने, उच्च रक्तचाप हुने, बसेर दिसापिसा वगर्न नमिल्ने जस्ता जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य समस्या आइपर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यिनै समस्याको समग्र विश्लेषण गरेर अन्य महिलाको तुलनामा किशोरी महिलाको प्रसव अवस्थामा मृत्यु हुने खतरा औल्याएको छ ।
उसले २० बर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती भएमा, अघिल्लो बच्चा दुई बर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका र तीन भन्दा बढी बच्चा जन्माउने आमाका बालबालिको मृत्युदर अरुको तुलनामा बढी छ । नेपालको कानूनले पनि किशोरकालीन विवाहलाई वर्जित गरेको छ । मुलुकी ऐनले महिलाको विवाह उमेर २० बर्ष तोकेको छ ।
तर ठूलो संख्यामा किशोरी आमा बन्दा तिनका बालबच्चाको स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा छ।
कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा किर्डाक नेपालले ६ महिना अघि गरिएको एक सर्वेक्षणले त्यहाँ बालविवाह ८६ प्रतिशत देखियो । सर्वेक्षण अनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहको प्रतिशत ५९ छ भने १८ वर्षमुनि ३३ प्रतिशतले विवाह गरेका छन् । जहाँ एक वर्षमा जम्मा ९ सय ४९ वटा विवाह भएकोमा उमेर नपुगी गरेका विवाहको संख्या ३ सय १३ छ ।
कालिकोटमा बालबालिकाका सवाल पहिचान सम्बन्धी जिल्लास्तरीय बालिका भेलाले बालविवाहलाई पहिलो समस्याका रूपमा औंल्याएको जिल्ला बाल सञ्जालकी अध्यक्ष अम्बिका भारतीले बताइन् । ‘बालविवाह, बालश्रम, महिनाबारी, छोराछोरीमा विभेदजस्ता प्रमुख समस्या छन्,’ कक्षा १० मा अध्ययनरत भारतीले भनिन् ।
बालविवाहले धेरै सन्तान जन्मिने, कुपोषण हुने, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा वृद्धि हुने, गरिबी बढ्ने लगायत बेफाइदा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा कालिकोटका स्वास्थ्य संस्थामा पहिलो पटक गर्भ जाँच गराउन आएका ४ हजार ५ सय ७१ मध्ये ९ सय १३ जना २० वर्षमुनिका रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव कटक महतले बताए ।
ललितपुरस्थित पाटनदरबार क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा महिला । तस्बिर : महिला खबर